🥇 ▷ Amarka Counter ee Meizu 16 iyo 16 Plus: waxaa la soo bandhigi doonaa 8da Agoosto, laakiin waqtigaan la joogo, waa kan markii hore la xaday ✅
Amarka Counter ee Meizu 16 iyo 16 Plus: waxaa la soo bandhigi doonaa 8da Agoosto, laakiin waqtigaan la joogo, waa kan markii hore la xaday
Si ka soo horjeedda wixii soo ifbaxay toddobaadyo ka hor, Meizu wuxuu bilaabay inuu faafiyo casuumaad loogu talagalay dhacdada soo bandhigid ee sare ee cusub ee u dhexeeya 16 iyo 16 Plus taleefannada casriga ah, ee loogu talagalayAgoosto 8, 2018. Soosaaraha Shiinaha ayaa sidaas darteed doonaya inuu ka sii darsado bilaabista Samsung Galaxy Note 9 maalin aad loo filayay isla markaana ku kasbanaya iftiinka tooska iyada oo aan faragalin weyn lagu sameyn.
Dhanka kale, si kastaba ha noqotee, labada aaladaha cusub waxay soo mareen qeybta shahaadada 3C, weli waa marxalad kale oo khasab ah marka la eego imaatinka suuqa Shiinaha. Wadada Meizu 16 iyo 16 Plus ma ka tagin raad raacyo xiiso leh oo ku saabsan faahfaahinta farsamo, kuwaas oo, si kastaba ha noqotee, waxaan naqaanaa SoC Snapdragon 845, ilaahyo 6 GB oo RAM ah, ee soo bandhig aan xad lahayn oo aan cabsi lahayn feejignaan wuxuu ku dhashay gudaha Sawir qaadaha sawirka faraha ayaa lagu dhajiyay muujinta ku kala duwan Dheeri ah. Macluumaadka oo dhan waxaa xaqiijiyey madaxa guud ee Meizu laftiisa.
AKHRISO: Meizu, waxba Flyme 7 Global oo loogu talagalay aalado kaladuwan
Ugu dambeyntiina, a toogasho toos ah ee Meizu 16, malaha nooca loo yaqaan ‘Plus version’. Nasiib darrose waxaad arki kartaa oo keliya dib aaladda, laakiin waqtigan xaadirka ah waan ku qanacsanahay: Khadadka ayaa u muuqda kuwo aad u nadiif ah, ku dhawaad ​​aan la aqoonsan, oo lagu garto isbadalada isirka camera labalaab ah iyo qalabka waxqabadka diirada laser, oo ay hareereeyaan giraanta iftiinka LED ee tooshka. Jirka cad oo dhalaalaya ayaa soo muuqan lahaa galaas, laakiin xaqiijinta kama dambaysta ah ayaa loo baahan doonaa. Kaasoo dhowaan imaan doona.
Dhanka: GSM ArenaXigasho: Nashville Chatter, MySmartPrice